Anisan’ny mahavariana, eo amin’ny tontolon’ny fanatanjahantena ny fisian’ny fihetsika feno fihatsarambelatsihy. Ahitana izany, eo amin’ny atleta samy atleta na ny mpitantana samy mpitantana na mpanazatra samy mpanazatra. Hita taratra ihany koa izany eo amin’ny atleta sy ny mpanazatra na mpanazatra sy raiamandreny.
Raha noheverina fa ao anatin’ny fanatanjahantena no ahitana ny toe-tsaina mahitsy sy madio, ny mifanohitra amin’izany ny zava-misy hita eny ambony kianja sy ety ivelany. Mifamingana avokoa ny rehetra. Rehefa tsy metimety amin’ny mpitsara ny ekipa, misy fingana atao amin’ny klioba ary tsy hamelana raha tsy mianjera. Tsy misy “penalty” anefa amin’izany fa samy miala. Raha potraka ny mpanazatra sasany, tsy misy mpanarina sy mampahery fa vao mainka aza finganina, hakana ny toerany.
Tsy mahafaly ny hafa mihitsy ny hahatafita ny ekipa iray fa arahina ozona aza, hahatafintohina azy. Ny an’ny hafa aza moa, tsy mifankahazo aminy ny filohan’ny federasiona na filohana ligy dia finganina, tsy ho tafita ny ekipam-pirenena. Toe-tsaina lomorina mifangarika amin’ny fanatanjahantena.